Madheshvani : The voice of Madhesh - स्थानीय सरकारको अधिकार पनि केन्द्रले तान्दै छ : जमिरूद्दिन मन्सूर
मेयर, हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही
२०७६ साल भदौैं २७ गते शुक्रबार
यस हरिपुर नगरपालिकाको स्थापना वि.सं. २०७३ सालमा भएको हो । जम्मा ९ वटा वडा रहेको यस नगरपालिका ६६.८६ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ७,१६७ घरधुरि रहेको यस नगरपालिकामा जम्मा जनसंख्या ४७,१८७ मध्ये माहिलाको संख्या २४,३७७ र पुरषको संख्या २२,८१० रहेको छ । यस नगरपालिकाको पूर्वमा ईश्वरपुर न.पा. लालबन्दी न.पा. र चन्द्रनगर गाउँपालिका, पश्चिममा बागमती न.पा., उत्तरमा हरिवन न.पा. साथै दक्षिणमा कविलासी न.पा. र बरहथवा नगरपालिका रहेका छन् ।
० तपाइँ निर्वाचित भएर आएदेखि नगरपालिकामा के–के काम गर्नुभयो ?
— धेरै वर्षको अन्तरालमा नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय सरकार बनेको छ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि धेरै चुनौतीहरू थियो । जनताका अपेक्षा पनि उच्च थियो । ती सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले सबभन्दा पहिला विकास निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दियौं । हामीले बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माण, विद्यालयमा शिक्षाको स्तर सुधार, स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा पु¥याउने, कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी लगायतका कामहरू गरेका छौं । २० वर्षदेखि हुन नसकेका कामहरू हामीले गरेर देखाएका छौं ।
० जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गरेका छन् ?
— हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरू ठोस रूपमा गरेका छौं । जनताले स्थानीय सरकारको महसुस एकदमै गरेका छन् । बाटोघाटो निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको छ । कृषि र सिंचाइमा पनि किसानलाई राहत मिलेको छ । शिक्षाको अवस्था एकदमै दयनीय थियो, त्यसमा हामीले ठूलो सफलता हात पारेका छौं । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाट पनि यहाँका जनता वञ्चित थिए, गरीब जनताले उपचार गराउन वा औषधि पाउन मुस्किल थियो । गरीब जनताहरूलाई उपचार गराउन जानका लागि पाँच हजार रूपैयाँ सहयोग गरेका छौं । सुत्केरी महिलालाई हामीले पाँच हजार रूपैयाँ सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराएका छौं । यसैगरी, हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
० सिंहदरबारका अधिकारहरू गाउँमा आएका छन् ?
— संविधानले दिएका कतिपय अधिकारहरू अहिले पनि केन्द्रीय मानसिकताले दिन खोजिरहेको छैन । स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि पनि हामीसँग सबभन्दा अभाव कर्मचारीको नै छ । साथसाथै केही नियम र कानूनहरूको पनि अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा हामीले सोचेअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं । लामो समयपछि स्थानीय सरकार आउँदा जनतामा ठूलो अपेक्षा देखिएको छ । विभिन्न बाधा र अवरोधका बाबजुद पनि जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्रममा छौं ।
० भनेपछि, पूर्णरूपमा सिंहदरबार गाउँमा आएको महसुस गर्नुभएको छैन ?
— त्यो अनुभूति छैन जनतामा । सिंहदरबार गाउँमा हल्ला मात्रै हो । जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि हामीलाई अहिले पनि पूर्ण अधिकार दिएको छैन । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । तर, त्यो अनुसारका अधिकारहरू हामीले पाउन सकेका छैनौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन लगायत क्षेत्रमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ । तर, हामी ती सबै कुरा परिचालन गर्नका लागि हामीसँग म्यानपावर छैन । केही न केही बहानामा हामीले पाएको अधिकार पनि केन्द्रले आफूतिर तानेको छ । शिक्षाकै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले पनि बजेट पठाउने पूरानै चलन छ ।
० संविधानतः पाएका अधिकारहरू नआएपछि तपाइँहरूले आवाज उठाउनु पर्दैन ?
— हामीले त सम्बन्धित ठाउँमा ती कुरा उठाउने गरेकै छौं । बेलाबखत सभा, गोष्ठीहरूमा जाँदा आफ्ना समस्याहरू राख्ने गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको अवस्था छैन । त्यसैले, सिंह त आयो तर दरबार काठमाडौंमै रहेको छ ।
० यस आर्थिक वर्षमा के कस्ता योजनाहरू ल्याउनुभएको छ ?
— हामीले समयमै नगरसभा गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाहरू ल्याएका छौं । हाम्रा योजनाहरू हामीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिसकेका छौं । हामीले विधिवत्रूपमा यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना योजना छ । हामीले ठोस पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएका छौं । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामीले विशेष योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं । यहाँको जनजीवन कृषिमा आधारित भएकाले उब्जनी बढाउनका लागि पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेका छौं ।
० कृषकका लागि के–कस्ता सुविधाहरू दिनुभएको छ ?
— कृषिउपज वस्तुको उब्जनीका लागि हामीले कृषकहरूलाई निःशुल्क बीउविजन उपलब्ध गरायौं । गत वर्ष पनि हामीले उपलब्ध गराएका थियौं । कृषिका लागि कृषि औजारहरू मिनि टेलर लगायतका सामानहरू पनि उपलबध गराएका छौं । यहाँ सिंचाइको समस्या छैन । यहाँ नहर छ र त्यहाँबाट सिंचाइको व्यवस्था मिलाएका छौं । तरकारी पकेट क्षेत्रहरूमा पनि ट्युवेल जडान गरेका छौं । सिंचाइ पहुँच नभएका ठाउँहरूमा बोरिङको व्यवस्था गर्ने हाम्रो योजना छ ।
० हरिपुर नगरपालिकामा करको दायरा कति बढाउनु भएको छ ?
— हामीले करको दायरा खासै बढाएका छैनौं । किनभने यहाँको मुख्य आयस्रोत कृषि नै हो । किसानबाट धेरै कर उठाउने कुरा हुँदैन । त्यसैले हाम्रो करको दायरा ठिकठिकै छ । अलिकति घडेरी जग्गा हुनेलाई मात्रै मूल्यांकन गरेर कर बढाएका छौं । यहाँ करलाई लिएर कुनै विवाद छैन ।
० बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान लागू भएको छ ?
— हाम्रो नगरपालिकामा दुई वटा विद्यालयमा आठ कक्षा पढ्ने छात्राहरूलाई साइकल वितरण मात्रै गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कार्यक्रम देखिएको छैन । यसले मात्रै छोरीलाई बचाउन र पढाउन सम्भव छैन । यसले विद्यालय आउन जान मात्र अलिकति सुविधा हुन्छ ।